Addunyaan dhimma Yaruusalem irratti murtee US balaaleffatte - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Sa'udiin murtee Tiraamp balaleffatte
Yeroo qeequmsi akka addunyaatti dabalaa dhufe kanatti, Sa'uudii Arabiyaan murtee Ameerikaan akka Yerusaalem magaalaa guddittii Israa'el taatee beekamtii kennite balaaleffatte.
Ibsa baasteen Sa'uudii Arabiyaan beeksifini Pirezidant Tiraamp kun "kan bu'uura hin qabneefi itti gaafatamummaa maleedha" jedhan.
Muumichi Ministeeraa Israa'el Beenjaamiin Netanyaahoon garuu murticha jajuudhaan "guyyaa seena qabeessa" jedhan.
Pirezidaanti Doonaaldi Tiraampi imaammata Ameerikaa seeraa qabeessa waggoota kurnan hedduu duraan ture gargalchuun Yerusaalem magaalaa gudditii Ameerikaa ta'uu ishee beekamtii kennuushee beeksisan.
Tiraampi tarkaanficha adeemsa nageenya Baha Giddu-galaa fuula duratti deemsisuudhaaf " dhimma baayyee irra arkifatedha" jedhan.
Carraan magaalaa durii kun dhimmoota Israa'eliifi Filisxeem gidduu jiru keessa kan hunda caaalaa ka'umsa rakkoo ta'edha.
Israa'el ejjennoo Tiraampi kana "seena qabeessa" jette ta'us garuu addunyaarraa mormii cimaatu mullata.
Yoo gama lamaaniinuu mirkanaa'e kan akka Filisxeemi of dandeesse Israa'el waliin jiraattu uumuu Ameerikaan ammallee rakkoo bara dheeraa lakkoofsise kanaaf furmaata gam-lamee ni deggerti jedhan.
Pirezidaantii Filisxeem Mahaamuda Abbaas Ameerikaan kanaa booda nagaaf walitti araarsuu hinhojjettu jechuun beekamtii kennuu Tiraampi kana "kan fudhatama hinqabne" jedhan.
Murtee Ameerikaa kanarratti mariyachuuf Mana Maree Nageenyaa Mootummoota Gamtoomanii 15 keessaa saddet dhuma torban kanaarratti walga'ii ariifachiisaa waameera.
Kun maaliif barbaachise?
Murteen Yesusaalemiin akka maagaalaa guddittii Israa'el taate beekamtii kennuu Ameerikaa uummata addunyaa haala Yerusaalem akka biraatti ilaalan waliin wal ishee dhabsiisa.
Filisxeem Yerusaalem Bahaa akka magaalaa gudditti ishee fuula duraatti ilaalti; akka walii galtee nagaa Israa'eliifi Filisxeem bara 1993 ttis dhumarratti maal ta'uu akka qabu sadarkaa maree nagaa kanarratti dubbatama jedha.
Abbummaan Israa'el Yerusaalemirratti qabdu akka addunyaatti beekamtii kennameef hin beeku; biyyoonni baayyeenis hanga ammaati imbaasii isaanii Tel Aviivuma tursiisan.
Yerusaalem amantaawwan gurguddoo sadan Yihudaa, Isilaamaafi Kiristaana qabattee jirti.
Yerusaalem Bahaa, kan Magaalaa Guddittii Durii dabalatu, Lola Guyyaa Ja'aa bara 1967 booda Israa'eliin qabame, haa ta'u malee akka qaama Israa'el ta'e akka addunyaatti fudhatama hin arganne.
Tiraampi maal jedhee?
Waayiti Hawusitti yeroo dubbatan Pirezidaantiin Ameerikaa kan "tarkaanfii kana kan fudhatan akkaataa fedha Ameerikaa eegsisuu danda'uufi nagaa Israa'eliifi Filisxeem gidduu jiru uumuu," jedhan.
Muummeen dhimma biyyaa alaa akka adeemsa imbaasii Ameerikaa Tel Aviivii gara Yerusaalemitti jijjiiruu eegalan akka qajeelchan dubbate.
Tarkaanfii akkasii kana waliin walqabatee rakkoo nagaan naannoo boora'uu mala jedhu jiraatullee, murtichi waadaa yeroo duulaa kan guutuufi hundee ilaalcha gama Tiraampi waliin deema.
Waadaa yeroo duulaa yaadachuun "Ar'a waadaan seena kennaan jira," jedhan gaggeessan Ameerika kun.
Yerusaalemiin akka magaalaa guddittii Israa'elitti beekamtii kennuun "dhugaa jiruuf beekamtii kenuu hin caalus gadis miti. Murtoon kun waanuma ta'uu qabudha," jedhan.
Gurmuun Jewiish Rippabilikaan durumaan Niiwuu Yoorki Taayimisi irratti beeksisaan pirezidaanticha galateeffatan. Gareen kun nama Rippabilikaana ta'eefi duula Tiraampirratti nama ol aantummaan arjoome Sheeldoon Adeelsaniin gaggeeffama.
Biyya keessaa hamilee argata
Xiinxala Barbaraa Piletii-Asher, Oduu BBC kan Waashingiteen
Pirezidaantichi akka irra deddeebiyanii dubbatanitti waadaa yeroo duulaa galan sana ba'ataa jiru, kunis siyaasni biyya keessaa mortoo mormisiisa kana akka murteessan isaan kakaasuu mullisa.
Beeksisuun sun caalmaatti miira karoora nagaa ibsuu qaba ture, Waayiti Hawusiin garuu ammallee wixineessutti jira. Kanaaf pirezidaantichi dubbiisaa keessatti caalmaatti qeequmsa irratti ka'uu danda'u dhiibuurratti ture.
Ameerikaan ammallee walitti dhufeenya gama lamaaniin fudhatama qaban jajjabeessuu keessatti dhimmee akka hojjeta; haala guutummaa magaalattii ilaalchisee garuu ejjennoo hin fudhatu.
Kunimmoo gaaffii Filisxeemi Yerusaalem Bahaa qabamee jirurratti qabdu ammallee mariif banaadha kan jedhu waan akeeke fakkaata. Garuu osoo siirriitti adda baasee dubbateera ta'ee, akkasuams osoo galmi dhumaa biyyota lamaan akka ta'e ifatti himeera ta'ee yaadni isaa caalaa kan amansiisu ture.
Kana jechuurra yoo gama lamaaniin irratti walii galame - kan Filisxeemi calsitee gama tokkoon barbaaddu osoo hin taane Ameerikaan furmaata kana ni deggerti. Haasawaan Tiraampi Filisxeemotaaf waan tokkollee hin kennine, Israa'eliif garuu ni murteesse.
Israa'eliifi Filisxeem maal jedhan?
Deebii murtee kanaan, Muummichi Ministeeraa Israa'el Benjaamiin Netinyaahoo guyyaa seena qabeessa, Israa'elis Pirezidanti Tirampiif galata guddaa qabdi.
" Waggoota kuma sadiif Yerusaalem xiyyeeffannaa abdii, hawwiifi kadhannaa kenyaati," jechuun toora tiwwteriirratti barreessan.
Gaggeessaan Filisxeem Abbaas, haasawa dursee TVf waraabameen magaalattiin "yeroo hunda magaalaa guddittii biyya Filisxeemi" jedhan.
Dura karaa dubbi himaasaanii "balaa guddaa uumuu akka danda'u" akeekkachiisanii turan; kun ammoo gaggeesitoota Arabaa warra tasgabbiin jiraachuu ni mala jedhaniinis himameera.
Moruteen sun osoo hin beeksifamiin dura waamicha garee Sochii warra Isilaamaa Hamaas yeroo ammaa kutaa Gaazaa bulchaa jiru taasifameen hiriirri akka ture, miidiyaan biyya keessaa degeraa Hamaas ta'e gabaaseera.
Hamaas murteen Tiraampi fedhiiwwan Ameerikaa naannicha keessatti "kan karra gaannem banudha" jedhan.
Addunyaan biroon maal jedha?
Murteen kun mormiin addunyaa Musilimaarraa deggertoota Amerikaa dabalatee yeroo dhaga'amaa jirutti ta'e.
Gaafa Kibxataa Mootiin Sawudii Arabiyaa Saalmaan, adeemsi kun "guutumnmaa addunyaarratti Musiliimota irratti xixxuqqaa cimaa kaasuudha" jedhan.
Hiriirri Gaazaafi Qoosilaa Ameerikaa Istaanbul, Turkiin jiru fuuduratti eegalee jira.
Barreessaan Dhaabbata Mootumota Gamtoomanii Antooniyoo Guteereez "yeroo kun yeroo muddama guddaadha," jedhan.
"Biyyoota lamaaniifi filannoon furmnaataa hin jiru. Karoorri B hin jiru," jedhan.
Muummittiin Ministeeraa Tereezaa Mayi "abdii nagaa naannichatti jiruuf kan hingargaarre" murtee Ameerikaa kana waliin walii hin galu, jedhan.
Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Makroonii Faransaayi murtee kana hin deggertu jechuun tasgabbiin akka ta'u waamicha dhiyeessaniiru.
Dipiloomaatiin Gamtaa Awurooppaa Federikaa Mogeeriiniin "yaaddoo cimaa" jechuun sagalee isaanii dhageesisaniiru.